PressReader - Kwayedza: 2019-01-04 - Hapana chekumirira apa
Kwayedza - 2019-01-04 - Denhe Reruzivo - Ticha Danga
ZVIPO zvakaita kudirwa munguva yeKisismusi uye mbatya itsva dzikapfekwa haikona zvekutamba. Iyo mimhanzi yakadandaurwa vanhu vakatsika pasi zvakaoma. Kwaisadanwa ainzwa nekuti yakanga iri nguva yacho.
V am we vaikoriwa nemhamba munzvimbo dzekutandarira. Vamwewo vakaenda kumamisha kuti vanofara nehama neshamwari.
Asika, chimwe nechimwe chine nguva yacho. Nyaya yedu yechikororo inodzokazve yoti-
bata tichibva mukuswaradza kwese kwatange tichiita. Ndinodaira kuti vose vakanyora bvunzo dzegwaro rechinomwe vakatotsvaga nzvimbo dzekuzvikoro zvepamusoro vakadziwana uye vakabhadhara mari nekutenga manyufomu.
Ngatisasiyawo kutenga mabhuku edzokorodzo dzechiShona nekuti tinoona
vanhu vachimhanyira kutsvaga ezvimwe zvidzidzo asi eShona vachisiya. Kuona kwangu izvi zvinobva mukudherera chiShona kuti chakapusa. Ndizvo zvakonzera kuti goho revamwe vana risafamba zvakanaka nekuda kwekusabuda zvakanaka muchiShona.
Vashoma vana vakabuda neimwe (1). Vazhinji vakawandira muzvibodzwa zvitatu (3) kusvika kuzvishanu (5). Izvi zvaibva zvakanda
goho remwana kure ozotadza kupinda pachikoro chine mukurumbira.